Wednesday July 19, 2017 - 10:04:08 in Wararka by Super Admin
Dhammaan dowladaha dawaaqiidda Afarta ah ee bil ka hor iclaamiyay isbahaysiga lamagac baxay ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada ayaa diiday in ay soo saaraan warsaxaafadeedyo ay uga hadlayaan xadgudubka ay Yahuudda Sahyuuniyadda ku heyso masjidka Barakaysan ee Al-aqsaa.
Mas’uuliyiin katirsan maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda ayaa warbaahinta u sheegay in meel wanaagsan uu umarayo wadahadallo ay kula jiraan dowladaha Sacuudiga iyo Baxreyn oo ku aadan in la caadiyeeyo cilqaadka ka dhaxeeya Yahuudda iyo qaar katirsan dowladaha carabta ee qeybta ka ah xamlada saliibiga ah ee lagu qaaday caalamka islaamka.
Thaamir Sahbaan oo ah wasiirru dowlaha arrimaha Khaliijka dowladda Aala Sacuud ayaa sheegay in cadaawaddii kala dhaxaysay Yahuudda ay dhammaatay islamarkaana hadda ay rajeynayaan in waxa loogu yeero israa’iil ay qeyb ka noqoto isbahaysiga ballaaran ee Trump uu bil ka hor ku dhisay magaalada Riyadh.
Wargeyska Ha'arts oo soo xiganaya saraakiil katirsan wasaarada arrimaha dibadda Yahuudda ayaa sheegay in dowladda Sacuudiga ay niyad wanaag iyo wadashaqeyn umuujisay maamulkooda, ilo wareedyo diblumaasiyadeed waxay sheegeen in imaaraatka Carabta, Sacuudiga iyo Masar ay diyaariyeen qorshe cusub oo dowladaha Carabta ay ku aqoonsanayaan waxa loogu yeero dowlada israa'iil.
Isbahaysiga Sacuudiga iyo Masar waxay diideen in ay cambaareeyaan xadgudubyada cusub ee Yahuuddu ugeysanayaan Masjidka Barakeysan ee Al-aqsaa iyo in shucuubta muslimiinta oo ay maamulaan ay dhigaa dibad baxyo lagu taageerayo kacdoonka Filasdiin.